Ku Biiri Taladaada Xuska 29 ka hidaar - Cakaara News
Ku Biiri Taladaada Xuska 29 ka hidaar
Ra'yiga Hidar 29(CakaaraRayi) Axad oct 06,2013. Aad iyo aad baan ugu faraxay sida fiican ay cakaara u soo gudbisay in ay dadku ka dhiibtaan fikradooda ku saabsan maalinta qawmiyaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xuska 2. Waa dimoqraadiyad iyo maskax caafimaad qabta oo aad u qurux badan.
Anigu waaxaan fikrad ku soo jeedinayaa in xaafad waliba ay beerto 29-geed oo maalintaasi lagu xuso, Maadaama ay dhirtu tahey quruxda iyo dabeecadda deegaanka. Sida aan ula socono waxaa dhulkeena ka socda nabaad guur lagu jarayo dhirta oo loo isticmaalayo dhuxul.
Dhirta marka la jarana dhulkii nabaad guur ayaa ku dhacayaa taas oo keni karta roob la;aan iyo abaarao. Waxaan deganahey dalka Kanada. Mar aan imid laba sano ka hor Jigjiga waxaan soo booqdey Jaamadda Jijiga ee sida quruxda badan loo dhisay. Laakiin waxaa ka maqnaa dhir la'aan. Geedo laguma beerin. Haddii dhir lagu beero Jaamacaddu way quru badnaan. Environmentiga way u fiican tahey. markaa ha lagu dadaalo dhirta Beeristeeda iyo Xanaanaynteedaba. Thank you Guuleed Xuseen Canada